Saliida Seytuunka oo la sheegay in ay ka waxtar badan tahay kaniiniga Viagra ee loo Isticmaalo… – Hagaag.com
Saliida Seytuunka oo la sheegay in ay ka waxtar badan tahay kaniiniga Viagra ee loo Isticmaalo…
Daraasad caafimaad oo laga sameeyay dalka Giriiga ayaa lagu ogaadey in saliida saytuunka ama Olive oil ay ka fiicantahay kaniiniga Viagra oo loo adeegsado daaweynta cillada kacsi la’aanta, sida lagu daabacay mareegtu laga leeyahay Jarmalka “Bild der Frau”.
Koox baarayaal ah oo ka socda Jaamacadda Athens ayaa soo gabagabeeyey daraasad ka dib markii ay falanqeeyeen xogta 660 rag ah oo celcelis ahaan jira da’da 67.
Xubnaha kooxda koowaad ee muunadda tijaabada cilmi baarista ayaa ugu yaraan sagaal qaado oo saliid saytuun ah usbuucii isticmaalay, halka xubnaha kooxda labaad aanan isticmaalin.
Natiijadu waxay ahayd in ragga sida joogtada ah u cuna saliida saytuunka ay si aad ah uga yar yihiin cillada dhibaatooyinka galmada marka loo eego kuwa aan isticmaalin. Intaa waxaa sii dheer, saamiga testosterone-ka ayaa aad uga sarreeyay ragga qaata saliidda saytuunka kuwa kale ee aan qaadan.
Si ka duwan daawada Viagra, saliida saytuunka ah kaliya ma ahan mid saameyn ku leh firfircoonaanta galmada muddo gaaban, laakiin sidoo kale waxay socotaa muddada dheer, halka Viagra-ha muddadiisu ay gaaban tahay.
Daraasado badan ayaa horey u cadeeyay waxyaabo badan ee wanaagsan oo laga helo saliida saytuunka, sidaa darteed cunta dhaqameedka dadka ku nool Mediterranean-ka, oo ku tiirsan kalluunka, khudradda, miraha iyo gaar ahaan saliidda saytuunka, waa mid ka mid ah cunnooyinka caafimaadka qaba ee adduunka, ayaa lagu sheegay website-ka Jarmalka.
Ka sokow faa’iidooyinka ay u leedahay la dagaallanka daciifnimada galmada, tijaabooyin badan ayaa muujiyay in saliidda saytuunka ay u wanaagsan tahay wadnaha iyadoo ka yareynayso sameynta Cholesterol-ka ee beerka, kana ilaalinaya halbowlayaasha haraaga khatarta halista ah, iyo yareynta halista xinjirooyinka dhiigga.
Saliidda saytuunka ayaa sidoo kale ka ilaalisa in xididdada ay xirmaan,waxayna u fududaysaa socodka dhiigga, maaddaama daciifnimada galmo ee ragga ay badanaa la xiriiraan xididada dhiiga qaada oo sidii la rabay u gaarsiin dhiigga xubinta taranka.
Gabagabadii, waa inaan xoojino in saliida saytuunka aysan daawo u ahayn cudur ama xaalad caafimaad, oo aan loo istcimaalin sidii bedal daawo ama la kulanka dhakhtar, sidaasi darteed weydii dhakhtarkaaga hadii kordhinta qaadashada saliida saytuunka ay kaa caawin karto la tacaalida dhibaatooyinka caafimaad qaarkood.